Fizahantany: hisy vidim-pidirana ny fitsidihana ny « Allée de Baobabs » | NewsMada
Fizahantany: hisy vidim-pidirana ny fitsidihana ny « Allée de Baobabs »
Par Taratra sur 09/01/2020
Betsaka ny mpizahatany malagasy, ankehitriny, liana amin’ny fitsidihana ny « Allée de Baobabs ». Tafakatra 32000 ireo mpizahatany tonga nijery ny « Allée de Baobabs », ny taona 2019 raha 17 000 izany, ny taona 2018, araka ny tatitra nataon’ny ONG Fanamby mitantana io toerana io. Hanamafy ny fanentanana sy ny serasera hatrany ny ONG Fanamby hijery akaiky ny tombontsoan’ny mponina manodidina sy ny fanajana ny tontolo iainana.
« Mitombo marina ireo mpizahatany ireo fa mitondra fampandrosoana ny faritra ve izany, manaja ny tontolo iainana, ary indrindra manampy ny mponina eny ifotony ve ireo mpizahatany ireo ? », hoy Rtoa Tiana Andriamanana, mitantana ny ONG Fanamby. Koa tsy maintsy jerena, araka izany, ny hahazoan’ny mponina tombontsoa sy hisian’ny fampandrosoana ny faritra amin’ny ankapobeny.
Hojerena amin’izany ny vidim-pidirana ao amin’ny « Allée de Baobabs », vinavinaina ho 35 000 Ar ho an’ny mpizahatany vahiny, ary 3 500 Ar , ho an’ny Malagasy. Mbola vinavina izany fa tsy maintsy ho faritan’ny lalàna ny fampiharana izany, hiaraha-manapaka amin’ny minisiteran’ny Tontolo iainana. Mbola maimaim-poana ny fitsidihana io faritra malaza eran-tany amin’ny fizahantany io amin’izao fotoana izao, fa ny toerana fiantsonan’ny fiara ihany no andoavam-bola 2000 Ar.